Diyaarad raalingelin ka bixisay "bustayaal" ay sheegtay in "laga xaday" - BBC News Somali
Diyaarad raalingelin ka bixisay "bustayaal" ay sheegtay in "laga xaday"
Shirkadda diyaaradaha ee American Airlines ayaa raaligelisay laba ciyaaryahan oo si qasab ah looga dejiyay diyaarad ka dib markii si khalad ah loogu eedeeyay xatooyo.
Marquis Teague iyo Trahson Burrell ayaa raacay diyaarad si ay uga qeyb galaan ciyaar.
Laakiin, ka hor inta aysan diyaaradda kicin, mid ka mid ah shaqaalihii diyaaradda ayaa sheegtay in ragga ay bustayaal ka xadeen qeybta qaaliga ah ee diyaaradda, xoog ayaana looga dejiyay.
Balse markii dambe waxaa soo baxday in rakaab saarnaa qeybta hore ee qaaliga ah, ay bustayaasha siiyeen raggaasi caanka ah.
Xuquuqda Sawirka @Dhouse35 @Dhouse35
Labada laacib ee kubadda koleyga waxay u dhasheen Mareykanka, asalkoodana waxay ka soo jeedaan Afrika, taas ayaana loo aaneynayaa in ay sabab u tahay in mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ay eedeysay.
Labada ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda qaran ee ciyaaraha yar, Memphis Hustle, kama aysan hadlin dhacdada.
Balse, ku xigeenka tababaraha kooxda Hustle, Darnell Lazere ayaa Twitterka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in uu aaminsan yahay in ficilka uu ku saleysan yahay jinsiyad.
Ciyaaryahannada waxay ka safrayeen Dallas, waxayna ku sii jeedeen South Dakota.
Afhayeen u hadlay shirkadda diyaaradaha, Joshua Freed, ayaa sheegay in hadda ay dib u eegis ku sameynayaan dhacdada.
Image caption Marquis Teague (bidix) iyo Trahson Burrell (midig) weli ka meysan hadlin arrinta
"Waan ka raaligelineynaa waxa ka dhacay duullimaadka dhexidiisa. Waxaan tusaale u noqoneynaa in aan dadka isu keenno, waana ognahay in diyaaradda gudeheeda aan ka geysanay fal niyad jebin ku ah qaar ka mid ah macaamiisheena", ayuu yiri.
Mr Teague iyo Mr Burrell waxaa la siiyay tikityo qeybta qaaliga ah, waxayna raaceen duullimaadkii dambe.
Kooxdooda ayaa Sioux Falls Skyforce uga adkaatay 131-115. Burrell wuxuu kooxda u keenay 15 dhibcood dhanka Teague,11 dhibcood.
Shirkadda American Airlines waxay muddo isku deyeysaa in ay xalliso eedaha ku saabsan in ay rakaabka u kala eexato.
Bishii Oktobar, kooxda xuquuqda rayidka ee NAACP waxay sheegtay in "arrimo aan wanaagsanayn ay ka warrameen rakaabka madow ee Mareykanka ah, waxay si gaar ah uga dacwoodeen shirkadda diyaaradaha ee American Airlines".
Ka dib waxay ballanqaaday shirkadda in tababar ay siineyso shaqaleheeda oo gaaraya illaa 120,000.
Gantaalkii K Woqooyi wuxuu 100km u jirsaday diyaarad meesha martay
Riyadaydii ahayd in aan sameeyo diyaarad guuxeeda ka dheereysa oo ii rumowday